etoju - egosi - MT4 Indicators
Home MT4 Indicators etoju – egosi
etoju – egosi
site Josh ọcha -
na-ede akwụkwọ: na
The egosi eji na-ewu usoro kọwara site Vladislav Antonov (ị pụrụ ịhụ ya nnọkọ reviews na Viak ma ọ bụ Alpari). M achọtabeghị ndị dị otú ahụ egosi na internet, otú ahụ ka m kpebiri ike ya site onwe m. N'okpuru ebe a bụ obere wepụ si ya nkọwa:
M na-ekwesịghị ịkọwa gị ihe nkwado na-eguzogide bụ. E nwere ọtụtụ ụzọ iji chọpụta price etoju. Otú ọ dị, M etinye onwe m calculations. The ike support / eguzogide edoghi kpebisiri ike na site MA edoghi, ma ndị ahụ nwere static ndị na-gbakọọ na ndabere nke a ibu timeframe.
1. Gbakọọ intraday etoju n'ihi na otu onye hour, ị ga-ewere High, Low na Close ụkpụrụ si nke bu ya ụzọ-hour ndọba oriọna.
2. Gbakọọ intraday etoju maka otu ụbọchị, ị ga-ewere High, Low na Close ụkpụrụ si bu ụzọ otu ụbọchị ndọba oriọna.
3. Gbakọọ intraday etoju otu izu, ị ga-ewere High, Low na Close ụkpụrụ si nke bu ya ụzọ-izu-idọba-oriọna.
M nyochaa, M gbakọọ price etoju nke support / eguzogide na ndabere nke otu ụbọchị idọba-oriọna nke bu ya ụzọ na ụbọchị. N'ihi ya, na price etoju ga-nti ogologo ụbọchị dum, ma anyị kwesịrị recalculate ha na-esote ụbọchị. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na anyị na-a otu ụbọchị ndọba oriọna 02.11.06: High = 1.2786 Low = 1.2736 nso = 1.2780 na inweta ihe na ọkwa maka ugbu a ụbọchị ma jiri ha na niile chaatị dị iche iche n'ihi na timeframes nta karịa otu ụbọchị timeframe. N'echi, anyị ga-agbakọ ọhụrụ etoju.
Enwere 3 ngụkọta oge ụzọ dị ka size nke bu ya ụzọ na ihe ndọba oriọna:
belatara - Support / eguzogide etoju nke a na-adịghị ike ahịa. Ọ bụrụ na ndị ahịa na-emechi na a nnukwu idọba-oriọna nke ihe karịrị 200 ihe, ọ ka mma iji nke a usoro, ebe ọ bụ na a mgbazi na-atụ anya, otú ahịa ga-ewepụghị.
nkịtị - Support / eguzogide etoju nke a ahịa na nkezi volatility. Daily idọba-oriọna mbio 100 ka 200 ihe. Nkịtị usoro dị mma iji mgbe a ufọk ufene ibu ma ọ bụ na-emikpu a na-hụrụ, idọba-oriọna ịbụ ihe dị ka nke otu size.
Extended (akp) - Support / eguzogide etoju nke a obodo ahịa. Црут ahịa ewezụga n'ime a triangle na-aghọ ewepụghị, anyị na-atụ anya a siri ike ije na-amalite n'oge na-adịghị na-eji etoju na-amụba price nso. Gịnị usoro ga-na etinyere ebe a, a na-adabere na gị onwe gị nnyocha na larịị ọnụ ọgụgụ anakọtara. Dị ka m, M ghara ịnọgide na-ihe a kọwara n'elu (nke a bụ averagely maka pound). Rute ugbu a, M na-ahọrọ ụzọ eduzi m nsinammuo na site na-atụ anya price ụkpụrụ.
N'ihi na ndị chọrọ ịgụ banyere nke a na nkọwa ndị ọzọ, ahụ: http://www.viac.ru/ds/21950
etoju – egosi bụ a Metatrader 4 (MT4) egosi na ọdịdị zuru oke nke Forex egosi bụ ịgbanwe akwakọba akụkọ ihe mere eme data.
etoju – egosi na-enye ohere ịchọpụta iche iche peculiarities na ihe nakawa etu esi na price Ọnọdụ nke na-adịghị ahụ anya na gba ọtọ anya.
Olee otú iji wụnye etoju – indicator.mq4?
download etoju – indicator.mq4
Copy etoju – indicator.mq4 gị Metatrader Directory / ọkachamara / egosi /
Right click na etoju – indicator.mq4
egosi etoju – indicator.mq4 dị na gị Chart
Olee otú iji wepu etoju – indicator.mq4 gị Metatrader 4 Chart?
n'isiokwuDelta - egosi
isiokwu na-esonụTrix - egosi